Germany inocheka COVID-19 yakasikwa kusadzivirirwa mamiriro kusvika pamazuva makumi mapfumbamwe izvozvi
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Jerimani » Germany inocheka COVID-19 yakasikwa kusadzivirirwa mamiriro kusvika pamazuva makumi mapfumbamwe izvozvi
Humbowo hwekutanga hutachiona hunofanirwa kupihwa pachishandiswa nucleic acid kuona kana PCR bvunzo. Chero ani anogona kuratidza mhedzisiro yePCR bvunzo ine mazuva angangoita makumi maviri nemasere ekuberekwa anonzi akapora.
The Robert Koch Institute (RKI), sangano rehurumende yeGerman rinoona nezvekudzora nekudzivirira zvirwere, rakaburitsa gwara idzva rakavakirwa pane zviri kuitika maererano neCOVID-19 denda, richizivisa kuti maGerman apora kubva kukoronavirus vachange vasina kudzivirirwa kwenguva yemazuva makumi mapfumbamwe chete.
Mitemo yekare yakataura kuti kutapukirwa kwekare kwaigona kushandiswa sehumbowo hwekudzivirira kwemazuva zana nemakumi masere.
Matanho aya akatanga kushanda neMugovera. Kana tichienzanisa, muSwitzerland, nguva iyo munhu anogona kudaidzira kusadzivirirwa achitevera hutachiona hweCCIDID-19 parizvino mazuva makumi matatu nemakumi matanhatu kubva pamhedzisiro yebvunzo.
Germany yakatarisana nefungu idzva rehutachiona rinotungamirwa nerinonyanya kutapurirana omicron zvakasiyana.
Huwandu hwemazuva manomwe hwezviitiko hwakapihwa neRobert Koch Institute nemusi weSvondo hwaive 515.7 hutachiona pa100,000 vanhu.
The Robert Koch Institute (RKI) isangano rehurumende yemubatanidzwa yeGerman uye sangano rekutsvagisa rinoona nezvekudzora nekudzivirira zvirwere.
Inowanikwa muBerlin uye Wernigerode. Sesangano repamusoro remubatanidzwa, riri pasi peFederal Ministry of Health.
Yakavambwa muna 1891 uye yakatumidzwa zita remutungamiriri wayo, muvambi wemazuva ano bhakitiroji uye mubairo weNobel Robert Koch.
Covid-19 MaGerman Jerimani
New Zealand COVID kesi dzinowedzera asi kuvhura miganhu ...